I-Samsung Galaxy A7 (2018) yokuqala yokubonakala kunye nokungabikho kwebhokisi | Zonke iinkonzo ze-intanethi
I-Samsung Galaxy A7 (2018) yokuqala yokubonakala kunye nokungabikho kwebhokisi
Samsung iyaqhubeka nokuzimisela ukubonelela ngomxholo phakathi kuluhlu lwefowuni ephathekayo ngaphandle kwento yokuba ezinye iimveliso ezinemvelaphi yaseTshayina ezinje ngeXiaomi ziyacinezela kwaye zomelele kakhulu. Kule meko sine Samsung Galaxy A7, Isiphelo sendlela esizise iikhamera ezintathu ezahlulahlula ezinye izixhobo kwicandelo lazo. Ukuzibophelela okucacileyo kweSamsung kwiifowuni ezingaphantsi kwe-400 euro.
Sifuna ukwabelana nawe ngombono wethu wokuqala we-Samsung Galaxy A7 (2018), i-terminal eneekhamera ezintathu embindini wenqanaba kunye ne-chiaroscuro eninzi. Kwaye kukuba i-terminal ye-South Korea firm inamacandelo amaninzi okuqaqambisa, kodwa kunye nezinye eziza kusishiya nobusi emilebeni yethu, masiye apho.
1 Uyilo kunye nezixhobo: Isamsung ifuna ukudlula njengeprimiyamu
3 Ezona khamera zintathu zifikelelekayo
4 Ukuphuculwa kwescreen kunye nesenzwa esitsha secala leminwe
5 Akukho USB-C ngokupheleleyo ngo-2018
Uyilo kunye nezixhobo: Isamsung ifuna ukudlula njengeprimiyamu
Isamsung iphinda ivule kwakhona i-aluminium kwi-bezels kunye neglasi ngasemva ukuze uyilo lungabi yingxaki xa uthenga le Galaxy A7 (2018). Ulwakhiwo luhle kwaye Ineglasi eyi-2.5D ngasemva eyenza ukuba ihlale kamnandi, kwangaxeshanye iyaphindeka kwiminwe. Nangona kunjalo, ngaphandle kweglasi engasemva, asinakho ukutshaja ngaphandle kwamacingo. Obu bubunzima kunye nemilinganiselo yokuchazwa kwesiphelo:
Ubungakanani: X x 159,8 76,8 7,5 mm
Ubunzima: I-168 gram
Ngelixa ingekho nzima, injalo siphambi kwesiphelo esikhulu kakhulu, Ukusetyenziswa kwescreen sayo ayisiyonyani njengoko inokubonakala, kuba iifreyimu eziphezulu nezisezantsi zibhengezwe ngakumbi kunokuba besinokucinga ekuqaleni. Isiphelo ngokungathandabuzekiyo senziwe kakuhle kwaye uluhlu lwemibala eluhlaza okwesibhakabhaka, emnyama kunye negolide luyathandeka. Kuya kufuneka sigxininise ukuba silibale iqhosha lokuqalisa embindini, Ukugqithisa umfundi osecaleni lomnwe ibekwe kakuhle, ineqhosha kunye nobungakanani obufanelekileyo.
Ukucaciswa kobuchwephesha kwi-Samsung Galaxy A7 (2018)
Umzekelo A7 (2018)
Inkqubo yokusebenza I-Android 8.0 enamava eSamsung
Isikrini I-6-intshi Super AMOLED enesisombululo se-FHD + (2220 x 1080 px) kunye ne-19: 9 ratio ne-411 PPI
Inkqubo I-Exynos 7885-engundoqo esibini ine-2.2 GHz kunye nesithandathu kwi-1.6 GHz
i-ram I-4 GB / 6 GB
Ukugcinwa kwangaphakathi 64/128 iyandiswa yi-microSD ukuya kuthi ga kwi-512 GB
Ikhamera esemva Ikhamera ye-24MP kathathu ene-f / 1.7 - 5MP ene-f / 2.2 i-engile ebanzi-8MP ene-f / 2.2 kunye nelensi ye-engile ebanzi ene-HD epheleleyo ye-30FPS yokurekhoda
Ikhamera yangaphambili MP eyi-24 ene-f / 2.0 kunye nokurekhodwa okupheleleyo kwe-HD
Conectividad IGPS kunye neBluetooth 5.0 -WiFi 802.11 ac kunye neLTE Cat6 eneNanoSIM kunye ne3.5mm Jack
Khu seleko Iscreen somfundi weminwe kunye nesikena sobuso esiqhelekileyo
Ibhetri I-3.300 mAh ene-40W yokutshaja ngokukhawuleza kunye ne-15 W engenazingcingo
Ixabiso Ukusuka kwi-349 euro
Ezona khamera zintathu zifikelelekayo
Isamsung ithathe isigqibo sokwahlulahlula le setheminali ngokusebenzisa iikhamera ezintathu ezibekwe nkqo ngasemva kwayo, njengoko besesitshilo ngaphambili 24.0 MP + 5.0 MP + 8.0 MP nge f / 1,7 + f / 2,2 kunye f / 2,4 ngokulandelelana, kunye I-angle engama-77º ububanzi embindini kwaye ekugqibeleni a I-120º eyongezelelweyo enkulu kwigumbi lokugqibela. Ikhamera ngokuqinisekileyo iyaguquguquka, kodwa ... Ngaba ibonelela ngumahluko omkhulu njengoko i-Samsung ifuna ukuyenza ibonakale? Kungekudala siza kuvavanya i-terminal ukufumanisa ukuba i-Galaxy A7 (2018) inokuba nguKumkani wokufota phakathi kuluhlu oluphakathi okanye hayi, kwaye kubalulekile ukukhumbula ukuba esi sigxina singaphantsi kwama-euro angama-400.
Ngokuqinisekileyo ngekhe ibe sisiiphelo sokuqala esithembisa umgangatho weefoto ongasinikeli kamva, kwaye kunjalo xa kuziwa kwiikhamera, sifunde ukuba okuninzi akusoloko kubhetele, njengeGoogle Pixel. Okwangoku, ixesha liya kuba lijongene nokusixelela ukuba yintoni umphumo.
Ukuphuculwa kwescreen kunye nesenzwa esitsha secala leminwe
Iscreen sesinye ophambili kule nto ISamsun Galaxy A7 (2018) kwaye imele ukuphuculwa kwemodeli yangaphambili, ukuba akunjalo kangako kumlinganiso wescreen, apho banqunyelwe khona ngaphezulu kokujikeleza iikona, inikezela ngepaneli Inkqubo ye-6 intshi Super AMOLED enesisombululo esipheleleyo se-HD +, Udidi kunye nokusonjululwa ekuphakameni kwezona zigaba ziphakamileyo kwaye yinto oyifumanayo emva kokudibana nesiphelo, ukuba inkulu kangakanani kwaye umgangatho wepaneli uya kukhuthaza kakhulu ukusetyenziswa kwemultimedia. Ingakumbi ukuba sithathela ingqalelo ukudityaniswa kweaudiyo zeDolby Atmos.
Olunye utshintsho olukhulu ngokubhekisele kwimodeli yangaphambili kukunyamalala kweqhosha lomzimba eliphakathi, nangona linokulingana, Isamsung yenze isigqibo sokubandakanya inzwa yeminwe kwiqhosha elisecaleni, kwisitayile sokwenyani sikaSony, ukhetho olunobukrelekrele oluguqulele ngokunyanisekileyo kubunewunewu besixhobo, xa uqala ukulibona kakuhle kwaye ukongeza, ibekwe kakuhle. Isamsung ilisebenzise eli thuba lamava athathelwa ingqalelo apha engenandlela intsha kodwa ngokuqinisekileyo iluncedo.
Akukho USB-C ngokupheleleyo ngo-2018
Inqaku elibi lesiphelo lishiya ukumangaliswa kukufumanisa ukuba itshaja esemgangathweni ayifakwanga ngaphantsi kwe-349 euro, kodwa ayisiyiyo imbi kakhulu, ukumangaliswa okwenyani kuza xa siqonda ukuba sinonxibelelwano olunye lwe-microUSB kwisiphelo ukuba bekungekho ngenxa yoko, bekungayi kushiya nto ukuba nomona nakuphi na ukuphela kwalo nyaka uphakamileyo we-2018 (kwinqanaba loyilo). Ukungabikho kokungenakuthetheleleka kwenkampani efana ne-Samsung ebandakanya i-USB-C kwezinye zezixhobo zayo kangangexesha elithile, andisiqondi isizathu sokuba inkampani yaseMzantsi Korea igqibe ukukhetha le port yokutshaja emiselwe ukulibaleka phambi kokuphela kwalo nyaka.
Elinye icandelo lokuqaqambisa kukuba ngaphandle kokumiliselwa ekupheleni kukaSeptemba, sifumana i-Android 8.0 njengeNkqubo yokuSebenza, nangona ukufika kwe-Android 9.0 kuthathwa ngaphezulu kweenyanga, ukuba iinkampani ziyaqhubeka nohlaziyo oluhambelanayo. Ezi ziimpazamo ezimbini ezinkulu endizichonge kunxibelelwano lokuqala nale Samsung Galaxy A7 (2018). Kule veki izayo siza kubuya nohlalutyo olunzulu lwalesi sigqeba kunye neekhamera ezintathu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » I-Samsung Galaxy A7 (2018) yokuqala yokubonakala kunye nokungabikho kwebhokisi
I-Flippy Skate yinto entsha engaqhelekanga evela kwiMidlalo yeKetchapp ukuyitya kwi-jiffy
I-Vivo Z1 uHlelo loLutsha, uluhlu olutsha oluphakathi olufikelelekayo ngoku olukhona ngoku kulandelwa kwangaphambili